Community & Society » မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အမှန်အတိုင်း ရှုမြင်ခြင်း – (တင်မ် ဟိန်းမန်း ရေးသည့် ဧရာဝတီပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်)	9
ခင်ဇော် says: ၂၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း တပ်မတော် ကို တကယ်တည်ဆောက်ခဲ့သလား
ဒါပေမယ့် အကြီးမားဆုံး ပြောင်းလဲသွားတာကတော့ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ဟာ　၁၉၉၀ နှစ်ဦးပိုင်းက စတင်ပြီး ၁၅၅ မမ နဲ့၁၂၂ မမ ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်များ အပါအ၀င် MLRS အတွဲလိုက် ဒုံးပစ် စနစ်များ၊ ရာပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့အမြောက် ၊ စိန်ပြောင်းများကို စတင် တပ်ဆင် အဆင့်မြှင့်တင် လာပါတယ်..။ အဲဒီထဲမှာ အစ္စရေး ၊ တရုတ် ၊ ရုရှား နဲ့မြောက်ကိုရီးယား နိူင်ငံထုတ် လက်နက်တွေ အဓိက ပါဝင်တယ်လို့ လဲ ဆိုပါတယ်…။　အမြောက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အောက်မှာ ဒုံးတပ်ရင်းများ စတင်ဖွဲ့စည်းလာပြီး ပြည်ပ စစ်လက်နက်ဆိုင်ရာ သတင်းရင်းမြစ် တစ်ချို့ ရဲ့ အဆိုအရ ယိုးဒယား-မြန်မာ နယ်စပ်တင်းမာမှု ပြသနာအပြီး ၂၀၀၃ နဲ့၂၀၀၄ ခုနှစ် ၀န်းကျင်လောက်မှာ ဒီ ဒုံးတပ်ရင်းတွေဟာ တရုတ်နိူင်ငံ လုပ် M11 တာတိုပစ် ဒုံးပျံ တွေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားလုပ် Hwasong အမျိုးအစား စကဒ်ဒုံးပျံတွေကို အများအပြား စတင် လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား သတင်းဌာန ရဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ　တပ်မတော်　အစိုးရဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မေလမှာ Daewoo ကော်ပရေးရှင်း နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၃.၈ သန်းတန် ဒုံးပျံ နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်လက်နက် ကန်ထရိုက်တစ်ခု ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ လဲ သိရပါတယ်..။
ဒုတိယထပ် ရောက်လာတာကတော့ ၅၉ မီတာအရှည် Hainan အမျိုးအစား Type 037　ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေး စစ်ရေယာဉ် ဆယ်စီး ပါ။ ၁၉၉၁ ဇန်န၀ါရီလမှာ ပထမ အသုတ် စစ်ရေယာဉ် ၆ စီးကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ မေလ မှာ တော့ ဒုတိယအသုတ် စစ်ရေယာဉ် ၄ စီး ( UMS 441 – UMS 450 ) တို့ ကိုလက်ခံ ရရှိခဲ့ပါတယ်….။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မတ်လမှာ တပ်မတော် အစိုးရဟာ　၆၃ မီတာအရှည်ရှိတဲ့Houxin အမျိုးအစား ဒုံးပျံတင် အမြန်သွား စစ်ရေယာဉ် ၆ စီး ( UMS 471 – UMS 476 ) ကို ၀ယ်ယူဖို့တရုတ်နိူင်ငံ နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်..။ဒီ သင်္ဘောတွေကို ၁၉၉၅ , ၁၉၉၆ နဲ့၁၉၉၇ ခုနှစ်တွေမှာ တပ်မတော်ရေ က လက်ခံရရှိခဲ့ ပြီး တပ်မတော်ရေ ရဲ့ ပထမဆုံး YJ -1 ( C 801 ) သင်္ဘောဖျက် ပဲ့ထိန်း ခရုစ် ဒုံးပျံတပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေ ဖြစ်လာပါတယ်…။　.
ဆယ်စုနှစ် တစ်စု အတွင်းမှာပဲ မကွေးလေယာဉ်ကွင်း ၊ ကော့သောင်း ၊ မြိတ် ၊ ထားဝယ် နဲ့မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့လေယာဉ်ကွင်းတွေကို အဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့ တည်ဆောက်မှု များ တောက်လျှောက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကို တွေ့ ရပြီး လေယာဉ်တည်ဆောက်ရေး နည်းပညာလဲ စတင်　ဖွံဖြိုးလာတာကို တွေ့ ရှိရ　ပါတယ်..။ ပြည်ပ စစ်ဘက် နည်းပညာ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေ ရဲ့ အဆိုအရ　၂၀၀၂ ခုနှစ် နဲ့၂၀၀၅ ခုနှစ်တွေမှာ တပ်မတော် လေ ဟာ အပေါ့စားလေယာဉ် တစ်စီးစီကို　အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်တပ်ဆင်နိူင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ STOL CH – 701 အမျိုးအစား အပေါ့စားလေယာဉ်　တစ်စီးကို အောင်မြင်စွာ တပ်ဆင် ပျံသန်းနိူင်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်…။　အခု ကျွန်တော် တင်ပြခဲ့တာတွေဟာ တပ်မတော်ကို လက်နက်တပ်ဆင် အဆင့်မြှင့်တင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကို အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် မဟာဗျူဟာ တပ်နေရာချထားမှု အစီအစဉ်တွေကို မဖော်ပြတော့ပေမယ့်၁၉၉၀ ခုနှစ်က ၂၀၀၀ ခုနှစ် အတွင်း မှာပဲ တစ်နိူင်ငံလုံးမှာ တိုက်ခိုက်ရေး ခြေမြန်တပ်မ ၂၅ ခုလောက် အသစ် တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ တာကို ထောက်ရင် တပ်ဖွဲ့ များ နေရာချထားမှု အစီအစဉ်ဟာ အတော်ကို ကြီးမားကျယ်ပြန့် တယ်လို့ခန့် မှန်း သုံးသပ်နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က တပ်မတော် ရဲ့အစွန်အဖျား အကျဆုံး တပ်ရင်းတွေဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အရောက်မှာ သူ့ ထက် အစွန်အဖျားကျတဲ့တပ်ရင်းပေါင်း ၅၀၀ လောက် အသစ် တည်ဆောက်ထားတဲ့အောက်မှာ ပျောက်ကွယ်လို့ နေ နေ ပါတယ်..။ပြောရရင်တော့ ဘယ် အစိုးရ အဆက်ဆက်ကမှ ခြေမချနိူင်ခဲ့တဲ့နယ်စပ်ဒေသ အမည်းရောင်နယ်မြေတွေ အားလုံးမှာ တပ်မတော် ရဲ့အခိုင်အမာ တပ်ရင်းတွေ ရာနဲ့ ချီပြီး တည်ဆောက် တပ်စွဲ နေရာယူနှင့်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ…
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု မေးစရာရှိတာက ဒါဆိုရင် တပ်မတော် က စစ်သည်တွေ ရဲ့ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ ရိက္ခာ　စစ်အသုံးအဆောင်တွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ဘာလို့ မမြှင့်တင်ရသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာ ပါတယ်။　ဒီနေရာမှာ ရှင်းပြစရာ အချက် ၂ ခု ရှိပါတယ် ပထမ တစ်ခုက ဘယ်အရာကို အရင် ဦးစားပေးလုပ်မလဲ ဆိုတာပါ..။
kai says: http://mmmilitary.blogspot.com/
Wow says: တွေ့ဖူးသလောက်တော့ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေက ရိုးသားပြီး ထက်မြက်ကြတယ်ဗျ… ဗမာကတော့ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုအညာသားမပါ) နဲနဲညံ့တယ်၊ ပျင်းတယ်၊ အမျှော်အမြင်နဲတယ်၊ ရေသာခိုတယ်၊ အပျော်အပါးမက်တယ်..
ခင်ဇော် says: Credit to original uploader
Alinsett@Maung Thura says: ဒီဆောင်းပါး ဧရာဝတီထဲ ဖတ်ပြီးပါပေါ့
naywoon ni says: အဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို ပရို မြှင့်​တင်​ဖို့ …… ။ မထင်​ပါဘူး ။ မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး ။ စိတ်​ကူးယဉ်​တဲ့ အလုပ်​တစ်​ခုပါ ။ အဲ့ တစ်​ခု​တော့ ရှိတယ်​ ။ အခု လက်​ရှိ စီနီယာ တစ်​က ​နေ ငါးရာ ​လောက်​ထိ ဖယ်​လိုက်​ ။ ငါးရာ့တစ်​က​နေ ​အောက်​အဆင့်​ ကို​လေ့ကျင့်​​ပေး အဲ့သလိုဆိုရင်​​တော့ နဲနဲ ​မျှော်​လင့်​ချက်​ရှိတယ်​ ။ ရာနှုန်းပြည့်​ ​အောင်​မြင်​မယ်​လို့ မ​ပြော​သေးဘူး​နော်​ ။ ၇၀% ​လောက်​ ဖြစ်​နိုင်​​ခြေရှိတယ်​ ။ လူ​သွေး​သောက်​ဖူးတဲ့ ကျားဟာ လူမြင်​ရင်​ ဆွဲချင်​သတဲ့ ​လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ဘာမှပရိုနေစရာမလိုပါ
kai says: မြန်မာပြည်မှာအလိုအပ်နေဆုံးအရာက.. အလုပ်တကယ်လုပ်တဲ့.. လူသားများသာပါပဲ..။
နောင်၁၀စု.. ၂-၃ခုလောက်မှာ.. တခြားတိုင်းပြည်တွေက.. ပေါက်ထွက်လာတဲ့လူတွေက.. ငွေထုတ်တွေပါကိုင်ပြီး.. မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းကိန်းမြင်ပါတယ်…။ အဲဒီအခြေအနေကြီးကို.. မိန်းမ,(တရားဝင်)မယူနိုင်တဲ့.. ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေက.. မိန်းမတရားဝင်ယူနိုင်သူတွေကို.. မနာလိုဖြစ်ပြီး.. တရားဝင်ကလေးတွေမွေးခွင့်.. လူဦးရေတိုးတက်နှုန်းကိုပါဝင်ရှုပ်နေကြပြန်သမို့…
လုံမလေးမွန်မွန် says: http://www.nato.int/docu/speech/1998/s980702h.htm
လောလောဆယ် ဒါလေး ရှာဖတ်နေတယ်.. အကုန်တော့ နားမလည်သေးဘူး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.